China okpokoro isi okpokoro isi - oghere oghere 2 na ndị na-emepụta | Shuangyang
okpokoro isi mkpuchi ọnụ - oghere 2
Mweghachi nke Neurosurgery, rụzie ntụpọ nke anụ ahụ, nke e ji mee maka ikpu okpokoro isi na njikọ.
• Enweghị ígwè atom, ọ dịghị ndọta na ndọta. Enweghị mmetụta na × -ray, CT na MRI mgbe arụ ọrụ.
• Njirimara kemịkalụ, ezigbo biocompatibility na nguzogide corrosion.
• Ìhè na nnukwu ekweghị ekwe. Kwadoro chebe ụbụrụ.
• Fibroblast nwere ike itolite n'ime ntupu oghere mgbe arụ ọrụ, iji mee ka titanium ntupu na anụ ahụ jikọtara. Ezigbo intracranial mmezi ihe!
2.0mm nyocha nke onwe
eriri cutter (ntupu mkpa)
ntupu ịkpụzi ngwa mkpaji
Oghere abụọ kwụ ọtọ bụ usoro akọwapụtara, usoro zuru oke nke na-enye mgbanwe, ịdị mfe nke iji ya, yana implants na akụrụngwa dị elu. Obere efere-achọ profaịlụ nke 0,5 mm maka ntakịrị ihe ịkụnye palpability. Otu ihe eji eme ihe maka ngwa ngwa ngwa ngwa nke okpukpu okpukpu.
Okpokoro isi bụ ihe ọkpụkpụ na-emepụta isi na vertebrates. Ọkpụkpụ okpokoro isi na-akwado akụkụ nke ihu ma na-enye oghere mkpuchi. Okpokoro isi nwere akụkụ abụọ: kranium na mandible. Akụkụ abụọ a nke ụmụ mmadụ bụ neurocranium na ọkpụkpụ ihu nke na-agụnye nsị dị ka ọkpụkpụ kasị ukwuu. Okpokoro isi na-echebe ụbụrụ, dozie anya abụọ anya, dozie positon nke ntị iji mee ka ụda olu nke nduzi na anya nke ụda. na-apụtakarị n'ihi nsonaazụ ike na-enweghị isi, mgbaji ọkpụkpụ okpokoro isi nwere ike ịbụ nkwụsịtụ n'otu ma ọ bụ ụfọdụ n'ime ọkpụkpụ asatọ nke mejupụtara akụkụ ahụ nke okpokoro isi.
Mgbaji nwere ike ime na ma ọ bụ dị nso na saịtị nke mmetụta na mmebi nke ihe owuwu dị n'ime okpokoro isi dị ka membranes, arịa ọbara, na ụbụrụ. okpokoro isi okpukpu anọ nwere ụdị isi anọ, linear, dara mbà, diastatic, na basilar. Dị kachasị dịkarịsịrị njọ, ma ọ dịghị mkpa ịme ọgwụgwọ, na-ejikarị ọtụtụ ọkpụkpụ gbajiri agbaji na-ejikarị arụ ọrụ, yabụ chọrọ ịwa ahụ iji mezie mmebi anụ ahụ. Ọkpụkpụ diastatic na-eme ka sutures nke okpokoro isi gbasaa ụmụntakịrị na-erubeghị afọ atọ.Basilar fractures dị na ọkpụkpụ dị na okpokoro isi.
Okpokoro isi okpukpu dara mba. Mee ya na hama, nkume ma ọ bụ ịkpụ ya n'isi na ụdị nsogbu ndị ọzọ na -emeghị ahụ na-ebutekarị okpokoro isi dara mbà. 11% nke oke mmerụ ahụ dị na ụdị mgbaji ndị a bụ mgbaji agbajiri agbaji nke ọkpụkpụ gbajiri agbawa n'ime. Okpokoro isi okpukpu dara mbà na-eweta nnukwu ihe ize ndụ nke nrụgide dị elu na ụbụrụ, ma ọ bụ ọbara ọgbụgba na ụbụrụ nke na-akụda anụ ahụ dị nro.
Mgbe enwere eriri n'elu mgbaji ọkpụkpụ, Ọkpụkpụ okpokoro isi dara mbà ga-eme. itinye oghere dị n'ime ya na gburugburu ebe obibi, na-eme ka ohere nke ofufe na ibute ọrịa na-abawanye. N'ime mgbagwoju anya nke ndi dara mba, ihe adighi adighi. A ghaghị ịwa ahụ maka ịkpụkpụ okpokoro isi dara mbà iji bulie ọkpụkpụ ya n'ụbụrụ ma ọ bụrụ na ha na-agbanye ya site n'ime ka oghere olulu dị n'akụkụ okpokoro isi dị nso.
A na-ekeji okpokoro isi mmadụ n'ụzọ abụọ: neurocranium, nke ọkpụkpụ asatọ cranial guzobere ma na-echekwa ụbụrụ, na ọkpụkpụ ihu (viscerocranium) nke nwere ọkpụkpụ iri na anọ, na-agụnyeghị ossicles atọ nke ntị dị n'ime. Ọkpụkpụ okpokoro isi pụtara na mgbaji ọkpụkpụ na neurocranium, ebe mgbaji ihu nke okpokoro isi bụ mgbaji ihu, ma ọ bụ ọ bụrụ na agbajiri agbaji, mgbaji dị egwu.
Ọkpụkpụ asatọ dị iche iche na-ekewa site na sutures: otu ọkpụkpụ dị n'ihu, ọkpụkpụ okpukpu abụọ, ọkpụkpụ abụọ nke oge, otu ọkpụkpụ occipital, otu ọkpụkpụ sphenoid, na otu ọkpụkpụ ethmoid.
Osote: temporal fossa interlink plate
Efere Anodized Cranial Interlink Titanium
Cranial 2 Oghere Interlink Titanium efere
Cranial Mastoid Interlink Titanium Efere
Cranial Temporal Fossa Interlink Titanium Efere
orthognathic 0.6 L efere 4 oghere
cranial snowflake ntupu m
orthognathic anatomical 0.8 L efere
maxillofacial trauma micro 90 Celsius L efere
Mkpọchi maxillofacial mini straight plate